Ukuvavanya ukuchaneka kwedatha yokuphakama kukaGoogle-Yothusa! -Geofumadas
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/Ukuvavanya ukuchaneka kwedatha yokuphakama kukaGoogle-Yothusa!
I-Google Earth inikezela ukufikelela kwidatha yakho yokuphakama ngentloko ye-Google Elevation API. I-Design Site Design, isebenzisa ngokunokwenzeka le nzekayo kunye neNtsholongwane entsha yeSatellite kwi-Surface. Lo msebenzi uvumela ukuba ukhethe indawo kunye nomgama phakathi kwamanqaku egridi, ubuyisela umgangatho ngamanqanaba ezinga elidibeneyo kunye ne-software ye-Civil Site Design kunye nomfanekiso wendalo.
Lance Maidlow of I-ChasmTech LLC yakhiwe le meko yokusetyenziswa okwakushicilelwa kuyo Umagazini weTwinGEO
Ndandisoloko ndifuna ukwazi ngokuchaneka kwedatha ehlinzekwa yiGoogle. Kwakukho iziganeko ezimbini zokusetyenziswa endizicingayo:
Ukuyila / ukuqulunqwa kwangaphambili kweziqephu ezintsha.
Ukufikeleleka kwipropati yesitya sokuhlalutya kwamagqabi e-HEC-RAS 2
Ngenjongo yokuphonononga, ndikhethile iisayithi ezimbini:
Indawo ye-1 yayiqhekeza kakhulu kwiDunedin, eFlorida. Ngenxa yale nto, ndandiyilanda kwaye ndacwangcisa kwii-2 izigidi zeengxelo ze-LiDAR kwi-website ye-NOAA.
Indawo ye-2 yayiqeshiso locetywayo lwezorhwebo kwiLake County, eFlorida, apho sasinomdla wolwazi kwi gridi ye-100, kunye neengxelo ezicwangcisiweyo zeziseko ezikhoyo.
Umsebenzi sathelethi ukuze ifike phezulu, iindawo eziveziweyo kwiindawo ezimbini zokuvavanya ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 nganye. Iimpawu ezivela kwi-Google's data data ephezulu zichanekile ngokumangalisayo xa kuthelekiswa ne-LiDAR kunye nedatha yophando.
Nangona kunjalo, kuya kuba luncedo kakhulu xa iGoogle inika umthombo kunye nomhla wedatha yakho yokuphakama.
Iziphumo zifana kakhulu, nangona kunjalo, iindawo zokuqala ze-LiDAR ziyi-8.5 ezinyaweni ezinyawo zifaniswa nelifa eliyaziwayo. Olu lungiso luye lwafakwa kwiData ye-LiDAR kwi-Design Site Design ngaphambi kokuba kuqalwe iinqonga, njengoko kuboniswe ngezantsi kwienkcukacha ezicacileyo zedatha yomhlaba phakathi kwemithombo emibini. Ukuphakama komyinge we1 / 2, 1 / 3 kunye ne2 / 3 zifana ngokufanayo. Ubude obuphakamileyo obuphakamileyo buyi-3 iinyawo eziphakamileyo kuneleyo ye-LiDAR idatha. Loo mahluko uchazwe kwinto yokuba iingongoma zixhamla kwiindawo ezivulekileyo xa kuthelekiswa nemimandla ehlanganiswe nemithi. Idatha yesatellite yakhiwe kwiGrid 20.
Emva koko, ukuhlolwa okubonakalayo kwedatha yesatellite kuboniswa ukuba kuthelekiswa kakuhle neemeko zangempela zomhlaba.
Kwimeko enje, i-node kwakufuneka ifakwe kwindawo ekuphakanyeni kweGoogle, ngokuchaneka ngokuchanekileyo kunye nomlo oqhelekileyo weekhava ngokumalunga neendlela ezikhoyo kunye neemeko zendawo zezindlu.
Ulwahlulo lweNdawo yoShishino
Kulo mzekelo woluhlu lolwabiwo-mali, iziqulatho zenziwe kwi-20 'grid eneenkcukacha ze-satellite, iifomvu ezibomvu zitholwe kwi-data yolwazi kwiGrid 100.
Ukwaziswa kwendawo, nangona kunjalo, kubalulekile kuba idatha yokuphakama ayinalo usuku oluchongiweyo. Ukuxinezeleka kwagqitywa kwaye ukugcinwa kwadalwa emva kokuqokelela idatha ye-Google yokuphakama. Ngokufanayo, ichibi lokubamba lakhiwa kwinqanaba elisempuma-mpa yesiza, emva kokuba yonke idatha yokuphakama iqokelelwe.
Umthombo weDevelopment data yaseGoogle, iyahluka ngokuya kwindawo yakho. Nangona ulwazi oluninzi malunga nedatha yokuphakama kweGoogle lungafumaneka kwimithombo ethile, luhlala luyimfihlakalo.
Nangona olu hlalutyo lugqwesileyo, lunokubonisa ukuba idatha ye-Google Elevation iyamkeleka kwaye ingaqwalaselwa ngumbono wokwakha i-urbanizations okanye ukuvelisa umgangatho womgcini, ongasetyenziselwa ukuhlalutya kwezikhukhula kunye nezicelo ezifana ne-HEC RAS 2.
RAUL ARROYO HERMOSO uthi:
Kunzima ukuthelekisa ukulunga / ukuchaneka kwedatha ye-altimetric efumaneka kwimithombo eyahlukeneyo.
Ingxaki ikwinkqubo yokubala / indlela yokwenza i-DEM okanye i-lidar yedatha ethelekiswayo ifunyenwe-> inyathelo lemeski, imodeli yeGeoidal ethathelwa ingqalelo, amanqaku olawulo njl.
Ndiza kuqhuba isifundo eSpain ukuthelekisa i-IGN's Lidar z orthometric, uvavanyo lwe-RTK GPS oluxhaswe ngumgangatho wokuchaneka okuphezulu kunye nomhlaba kaGoogle -> kwibhlog yam ndiza kukuxelela okuphumayo….http://autodidactaengeomatica.blogspot.com/
Imibuliso kunye nombulelo ngegalelo lakho ...